Messenger Marketing • Toe Tet
Kyaw Zin Lat
Today Promotion = 30,000 MMK
Messenger Bot ရဲ့ တန်ကြေး ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် Service ပေးခဲ့တဲ့ ဝန်ဆောင်ခ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် အမတန် စျေးသက်သာစွာနဲ့ တက်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါပြီ….
လက်ရှိမှာ Messenger Bot တစ်ခု Setup လုပ်ရင် ကျွန်တော် Online သင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ ( ဒေါ်လာ ၁၀၈၀ တန် Online သင်တန်း School of Bot ) US အ​ခြေစိုက် သင်တန်းက ကျွန်တော်တို့ ကို Bot တစ်ခုကို Basic Charge လုပ်ဖို့ US 1000 စပြီး Charge လုပ်ခိုင်းတယ်…
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားနဲ့ ကိုက်ညီအောင် Bot တစ်ခုကို ၃ သိန်း တော့ အနည်းဆုံးယူတယ်…အခုတော့ ကျွန်တော် လေ့လာထားတဲ့ School Of Bot က သင်ခန်းစာတွေ အပြင် Udemy က Course4ခုလောက်ကော YouTube က Video အချို့ ကကော အကောင်းဆုံး အသုံးဝင်ဆုံး Bot Flow နဲ့ Logic တွေကို တစ်ခါတည်းနဲ့ အမြည်းမကြွေးပဲ အပြီးပေးဖို့ သင်တန်းလေး တစ်ခု စီစဉ်ထားတာ အချောသက်ပြီးသွားပါပြီ….
Facebook Marketer တွေကို အချိန်သက်သာစေတာ Boost Budget သက်သာစေတာ User Experience ကို Improve ဖြစ်တာ မိမိ Customer တွေရဲ့ အကြိုက်ကို Auto မှတ်သားထားနိုင်ပြီး လိုအပ်ချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ Product Recommend ပေးနိုင်တာ စတဲ့ အချက်များအပြင် Messenger Bot ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရည်ကို ကျွန်တော့ တော့ ဒီလို Level3ခု ခွဲထားတယ်…
ဝင်လာတဲ့သူတွေ ကို Business Owner ရဲ့ Product/ Service ကို စနစ်တကျ ပြပေးနိုင်ရမယ်…
ဥပမာ: ဘယ်လို Product တွေရှိတယ်, ငွေလွှဲအချက်အလက်, Company Location ကို Map နဲ့ ပြနိုင်တာမျိုး
ပြတဲ့အခါ တွေ မှာ လည်း သာမန် ပြသရုံထက်ပို တဲ့ User တစ်ယောက်ချင်းအလိုက် Specific Product/ Service တွေ ကို Recommend လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်…
ဥပမာ- User က မိမိရဲ့ Product Catalouge တွေ ကို ရွေးချယ် ရင်း ဝယ်ဖို့ လမ်းမပျောက် အောင် Final Recommend ပေး ပြီး Sale Close လုပ်နိုင်ရမယ်..
Recommend ပေးနိုင်တဲ့အပြင် User တွေရဲ့ Botထဲ ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှု တွေရဲ့ Interest Stage အလိုက် သူတို့ Bot ထဲ က ပြန်ထွက် သွားတဲ့ အခါ သက်ဆိုင်ရာ Specific Follow Up Message တွေ ကို Auto ပို့ပေးနိုင်ရမယ်…
ဥပမာ: User က Business Owner ကမ်းလှမ်းဖော်ပြထားတဲ့ Conversation Flow တစ်ခု ထဲ ဝင် ရောက်ကြည့်ပြီး Flow အဆုံးမသတ်သေးခင် ပြန်ထွက်သွားတာကို Auto သိရှိနိုင်ပြီး Follow up message ကို လူပေါင်းများစွာ အတွက် Auto Remind လုပ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ AI ကို ထည့်သွင်းနိုင်ရမယ်…
ဒီ Level3ခုလုံးကို အခုသင်တန်လေးမှာ အကုန် ပုံပြီး တစ်ခါတည်း မမြည်းမကြွေးပဲ အပြီး ပေး မယ့် သင်တန်းလေးအခုစတက်လို့ရပါပြီ….
1 A Connect With Chatfuel
1 B Connect With Page
3 Welcome Message, Default Answer, Set up AI
4 Block, Element
5 Redirect To
6 Connecting block in4ways
7 Understanding user attribute with redirect to element
8 Attribute Deliver Now, Later
9 Attribute -Trigger
10 Understanding Group and Sequence
11 Deep understanding block, group and sequence
12 Video element and creating block link
13 Using Attribute Deeply
14 Using Attribute Deeper
15 Connecting Block Advanced in3ways
16 Understanding Live Chat Plug In
17 Comment To Message wisely
18 Contact Form Creation ( User Input and User Attribute )
19 Contact send to Email
21 Subscribed to Sequence and unsubscribed to sequence
22 Persistent Menu
23 Contact Form Export To Google Sheet
24 Subscription with trigger
25 Subscription with sequence
Bonus 1 _ Location Map
Bonus2_ Location On The Google Map
Bonus 3- Multiple Choice
Bonus4- Website Chat Plug in
Bonus5_ Default Answer Timer
Bonus6Messenger Ad + Bot